दुई महिनामै २६ हजार युवा मलेसिया पुगे – Dhadingnews.com – Exploring social, politics, agricultural, health, entertainment and district news of dhading.
छुट्टाछुट्टै स्थानमा दुर्घटना, दुईको मृत्यु , एक घाईते
धादिङमा पुनर्निर्माणमा महिलाहरू सक्रिय
पार्टी तथा भातृ संगठनकाे अधिवेशन रोक्ने एमालेकाे निर्णय
त्रिशुलीमा ट्रक खस्दा तीन घाइते
राष्ट्रपति चयनका लागि फागुन २९ गतेको मिति घोषणा
यस्तो पुरुषप्रति स्त्रीहरु हुरुक्कै हुन्छन्
धादिङका भूकम्प प्रभावितहरू अनुदानको आसमै एककोठे घरको बास
सुत्केरीढुंगाबाट चरेश सहित दुई जना पक्राउ
एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकतामा सात बुँदे सहमति
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार कर्मचारी अख्तियारको छानबिनमा
दुई महिनामै २६ हजार युवा मलेसिया पुगे
69 पटक पढिएको
प्रकाशित मिति: ३ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १९:१८
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को साउन र भदौमा वैदेशिक रोजगारीका लागि २६ हजार चार सय ७२ युवा मलेसिया गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार भदौमा मात्रै म्यानपावरमार्फत नयाँ भिसामा १२ हजार ५० युवा रोजगारी गर्न मलेसिया पुगेका छन्। यसमा ११ हजार सात सय ७१ पुरुष र दुई सय ७९ महिला छन्।
यसैगरी भदौ महिनामै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर १९ सय ६६ युवा मलेसिया गएका छन्। संस्थागत (म्यानपावर) र व्यक्तितर्फ गरी भदौमा मात्रै श्रम स्वीकृति लिँदै मलेसिया पुग्नेको संख्या १४ हजार १६ पुगेको विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसैगरी साउनमा १२ हजार चार सय ५६ युवा रोजगारीका लागि मलेसिया पलायन भएका थिए।
चालू आवको भदौ महिनामा मात्रै ५१ हजार ७६ युवा रोजगारीकै लागि विश्वका विभिन्न मुलुक पुगेका छन्। चालू आवको सुरुसँगै मलेसिया जाने युवाको संख्याका ह्वात्तै बढेको छ। खाडीको आन्तरिक द्वन्द्व र कतारलाई एक्ल्याउन खोज्दा युवाको रोजाइ मलेसिया बन्न पुगेको छ। खाडी राष्ट्रबाट हुने कामदार माग दिनदिनै घटेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन्। खाडीका जाने युवाले विकल्पका रूपमा अहिले मलेसिया रोज्न थालेको उनको भनाइ छ।
गत आवको साउन महिनामा म्यानपावरमार्फत ६ हजार सात सय एकजना र भदौ महिनामा सात हजार दुई सय ९२ युवा मलेसिया गएका थिए।
चालू आवको दुई महिनामा म्यानपावरमार्फत मलेसिया जाने युवाको संख्या गत आवको दुई महिनाभन्दा नौ हजारभन्दा बढी छ। गत आवको दुई महिनामा म्यानपावरमार्फत १३ हजार नौ सय ९३ युवा रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए भने चालू आवको दुई महिनामा २३ हजार दुई सय १७ युवा मलेसिया पुगेका छन्।
गत आवमा मासिक सरदर ११ देखि १२ हजार युवाको रोजाइमा परेको कतार जानेको संख्या भने चालू आवको सुरुसँगै भन्डै ५० प्रतिशतले गिरावट आएको छ। चालू आवको दुई महिनामा १३ हजार दुई सय ६६ युवा रोजगारीका लागि कतार पुगेको विभागले जानकारी दिएको छ। तर गत आवको सोही अवधिमा ३१ हजार पाँच सय ६ युवा कतार पुगेका थिए। साउदी, दुबई, ओमन र बहराइन जाने युवाको संख्या पनि गत आवभन्दा चालू आवमा ५० प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ।
मलेसिया जानेको संख्या ह्वात्तै बढे पनि समग्रमा म्यानपावरमार्फत रोजगारीका लागि विदेश जानको संख्यामा भने गिरावट आएको छ। गत आवको साउन र भदौमा म्यानपावरमार्फत ६५ हजार पाँच सय २१ युवा विश्वका विभिन्न मुलुकमा रोजागरीका लागि पुगेका थिए। तर चालू आवको साउन र भदौमा गरी ५९ हजार दुई सय सात युवा रोजगारीका लागि विदेश पलाएन भएका छन्। योसँगै चालू आवको दुई महिनामा कोरिया जानेको संख्या एक हजार तीन सय ३८ छ। यसमध्ये २७ जना महिला छन्। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
३ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १९:१८ मा प्रकाशित
धादिङ, १२ फागुन - शनिवार विहान धादिङ जिल्लाको दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि दुई जनाको ज्यान गएको छ भने एक जना घाईते भएका छन् । धादिङको गजुरी गाउँपालिका वडा नं १ कालिका मन्दिर नजिकै.....
धादिङ -बन्दै गरेको घर, चाहे जग खन्दै होस् या गाह्रो लगाउने चरणमा । बन्दै गरेको हरेक नयाँ घरमा महिला कामदार.....
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकिकरणको सहमति भइसकेको भन्दै एमालेले पार्टी कमिटी र भातृ संगठनका.....
काठमाडौं, फागुन १० - निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चयनका लागि फागुन २९ गतेको मिति घोषणा गरेको छ। आयोगले.....
धादिङ, ८ फागुन - धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ सुत्केरीढुंगाबाट प्रहरीले प्रतिवन्धित लागुऔषध चरेश बरामद.....
धादिङ न्युज डट कम धादिङ जिल्लाबाट संचालन भईरहेको निस्पक्ष सूचना र संचारको संवाहक हो । हामी स्वतन्त्र छौं, हामी कुनै पनि राजनीतिक. सामाजिक तथा अन्य किसिमका पूर्वाग्रहबाट अलग छौं । तपाईंको सूचना र संचारको हकको लागि समाजका विकृति र विसंगतिहरू बिरुद्ध हामी निरन्तर कलम चलाइरहनेछौँ । हामीलाई सूचना जानकारी उपलब्ध गराएर हाम्रो यस अभियानमा तपाईंले पनि साथ् दिन सक्नुहुनेछ । यसमा तपाईको संघ सस्था वा व्यापारीक प्रयोजनका कुनै पनि विज्ञापन वा सन्देश संप्रेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
Galchhi Rural Municipality Ward No.6,Baireni,Dhading ,Province No.3,Nepal
Tel : 010- 403158/010-520838, 010-521027
Mobile - 9851120838
©2013 धादिङ न्यूज दैनिक (दर्ता नम्बर २७/२०७१-७२ जि. प्र. का. धादिङ,)द्धारा प्रकाशित डिजिटल पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम सम्पादक : एशोदा नेपाल , प्रधान सम्पादक :केशव अधिकारी , कार्यकारी निर्देशक : बुद्धिमान वाइबा , मुख्य कार्यालय: गल्छी गाउँ पालिका वडा नम्बर ६,धादिङ ,फोन ०१०-४०३१२९ सम्पर्क मोवाइल : ९८५११२०८३८ /९७५१०२०८३८ ,इमेल : dhadingnews@gmail.com सदरमुकाम सम्पर्क कार्यालय : नीलकण्ठ नगरपालिका - ३ ,धादिङबेसी, फोन :०१० -५२०८३८/५२१०२७